Sepsis iyisifo ezivamile ezithathelwanayo ezivela khona ku izicubu Locus umzimba. Nokho, enezinto eziningi umehluko uma ziqhathaniswa nezinye izifo ukuthi babe omsakazo efanayo, okungukuthi, izimpawu sepsis isithombe ezahlukene ukuthuthukiswa esizayo. Uma sicabanga sepsis ngokuya ukuxilongwa kanye nokwelashwa okwalandela, wachaza indlela evamile angahleliwe kanjani noma ukungeneli begazi umzimba njengempendulo esethulweni Amagciwane yakhe nonspecific amagciwane abe nenkani. Nokho, kuhambisana nje okungaqondile yayo, ngulona logeleta njengoba inqubo yahlukaniswa ngezigaba kokuba obuphelele ezahlukene.
Sepsis - Ukubekwa
Kukhona amafomu ezine sepsis, kuyilapho zinamagama ehlukile futhi ngezigaba odokotela abahlinzayo (pyo-resorptive imfiva, hroniosespsis, pyosepticemia, septicemia) kanye pathologists (hroniosespsis, pyosepticemia, septicemia futhi bakendokardit). Futhi, kuye ngokuthi isango emnyango sepsis uhlukaniswe:
• zokwelapha (paraifektsionny);
• Oto-futhi odontogenic;
Ngokusho ukugeleza izinga yokukhululwa kanje:
• sepsis ezingamahlalakhona;
• subacute (7 kuya 14sutok);
• acute (cishe 5-7sutok);
• fulminant (amahora angu-24 kuya ku-48) sepsis.
Kukhona division kuye ukuthuthukiswa waphawula isithombe emtholampilo:
• Early - kwenzeka esikhathini ezingekho ngaphezu 3 amaviki (ngaphambi langempela ukufohla Indwangu);
• Late (amasonto angaphezu 3).
Kulo mBhalo indawo okuzobhekwa zisuka nje ukutheleleka ilahlekelwa ukubaluleka ngoba impatho kwaleso sifo. Kungakhathaliseki okuyinto kuleli cala ngayo izimpawu sepsis.
I causative ejenti ye sepsis
Etiology wehlukile njengoba sepsis polietiologichen. Umsebenzi obaluleke kunayo amagciwane ezibangela sepsis zisekhona staphylococci. Ngenxa yabo, kukhona cishe 50% amacala. Ngemva zingabantu streptococci, Proteus, futhi Pseudomonas aeruginosa.
Naphezu kweqiniso lokuthi izenzo sepsis kukhona nonspecific, etiology we lwegciwane kunethonya elikhulu izimfanelo flow yayo, okungukuthi, izimpawu zesifo kanye nokuthuthukiswa sepsis simiswe ngalendlela lelandzelako:
• staphylococci - Ukudlulela elikude, inyumoniya ukonakala;
• streptococci - esiphelweni kwenzeka lymph (lymphadenitis, lymphangitis), futhi lihambisana namanye amanxusa;
• Pseudomonas aeruginosa - a esiphelweni umbani, ukwethusa ukusabela;
• E. coli - peritonitis, sepsis peritoneal;
• clostridia - necrosis, gassing, ukuvuvukala;
Zonke izici zibangelwa ubuthi enzyme ezivezwa amagciwane.
isigaba lesi sifo
Amasosha omzimba kubantu uma sepsis is hhayi kukhiqizwa. Ukuxilongwa kanye nokwelashwa of sepsis thiya iqiniso ukuthi akanayo Ukuphinda, okuyinto sici kwezifo ezithathelwanayo kakhulu. Kwenzeka nesenzakalo hyperergic ukuphendula engakufanelekele ukutheleleka generalized, uma nakwenzeka kwasendaweni yayo.
Okwamanje, kunezinhlobo esigabeni esilandelayo lesi sifo, izimpawu sepsis is ezahlukene:
• Ukucindezeleka - uma kubonakala impendulo yempi lwegciwane. Uma kwenzeka ukuthi impendulo ukuvuvukala wendawo alanele, mhlawumbe iinthombe obusebenzayo Uhlelo lokuvikela, ne iqhaza futhi simpatoadrenalovoj gipotalano-pituitary.
• catabolic iziyaluyalu - kukhona ukusetshenziswa okuqhubekayo enzyme futhi alondoloza kwesakhiwo umzimba. Lapho decompensation obusebenzayo kwenzeka izinhlelo.
• steroid - uma elahlekile amalungiselelo okuhlaselayo sebeqala alulame.
A ikhanda nsuku zonke: Ungamsiza?
"Psychopaths Seven": nabalingisi izindima isithombe
Isisekelo sesistimu yezinombolo. ISIBONELO nepozitsionnyh inombolo izinhlelo